Taariikhda My Butros » Farm Liiska Bedlam ee mustaqbalka Dog Milkiilayaasha
Last updated: Aug. 08 2020 | 7 min akhri
* Hel eey aad rabto.
Xad-gudub ah ee xoolaha ee guud, iyo eeyaha gaar ahaan, badan keentay of milkiilayaasha in ay Xukuntay in habka keliya ee moral waa si loo badbaadiyo eey ka pound ah, halkaas oo uu wajahayo UCID. Waxa ay noqon kartaa waayo-aragnimo la yaab leh si ay u badbaadiyaan eey (my collie xadka badbaadiyey Orson waxaa jiifa miiska ii dureeri), laakiin, sida eey lahaanshaha laftiisa, ma ahan qof kasta. Waxa kale oo ay noqon kartaa waayo aragnimo cajiib ah in la helo eey weyn ka buu u wanaagsan. Waxaan haystaa laba ka mid ah kuwa, sidoo: mid ka mid lo 'ido iyo waddaa beertayda, iyo newest ee, Clem, suffuses aan guriga iyo nolosha la wehelka macaan. Waxaan dhoola ku dhowaad mar kasta oo aan eegno iyada. Qofna u yeerin karo nooca eey idinku waajib ah in aad hesho, Dhab ahaan uma aan. Waxaad u helay in ay is ogow waxa of, si aad u hesho mid ka mid tahay in ay u badan tahay in ay jecel yihiin in aad.
Laakiin aad sameyso shaqada guriga. Xitaa ka fikirina, waxa wali aan wax ka mid ah crapshoot ah. Dogs iibsaday dukaamada xayawaanka badan tahay ka daqiijin jireen eey yar yimaadaan hawlaha taranto-mugga sarsare oo inbreeding abuuraa iyo perpetuates dhibaatooyin caafimaad iyo dabciga. Sida laga soo xigtay waxbarashada xusay by editor James Serpell iyo saaxiibkiisii ​​J. A. Jagoe in Dog Gudaha, eeyaha laga helay dukaamada xayawaanka waxay u badan tahay in ay muujiyaan cabsi bulshada iyo gardarada nooca-xukunkiisa badan eeyaha ka dhaqda ama hoyga. Qaar badan oo eeyaha gurmadka iyo hoy ay haystaan ​​dhibaatooyin dabeecadeed, qaladka lahayn ee iyaga u gaar ah. Waxana lagu soo xadgudbay, buuqsan, ama si joogta ah dib-u-homed, heer ah in, sida ay Jaamacadda Pennsylvania School of Veterinary Medicine, tahay u badan tahay in ay dhib sida khasabka ah qaadku ay, gardarada, Barking, cunid, iyo waxa dadku call “walaaca separation,” badan purebreds ka dhaqda oo tayo leh.
Kooxaha samatabbixinta Responsible iyo shaqaalaha hoyga taas oo keliyana ma aqoonsan, laakiin hubi in adopters u fahmaan, si eeyaha ha ka soo kabsato ama, ka xun, xanuunsado oo u gudbisid dhaawacaan dadka kale. Laakiin waxaan aragnay qaar ka mid ah shaqaalaha gurmadka suffused la soo laabadka oo furitaankii eeyaha loo Masaakiinta oo aad u dooneysa inay u guuraan eeyaha rabshad ama naxaysaan guryaha caadiga ah. Oo xataa eeyaha ka dhaqda ogsoon yahay waxaa qaabeeya hooyooyinka iyo walaalaha, si ay qaarkood yihiin waxyeelo, Cabsan, oo ku dhuuntaan, halka qaar kalena ay ku bartaan si ay u dareemaan amaan oo is-aaminaad. Badan oo dhaqda damiir ama hunguri mass-soo saaro eeyaha loogu talagalay sababo is-qurxinta ama ganacsi, iyada oon loo eegin taariikhda caafimaadkaaga ama dabciga. Tan iyo markii eey caalamka ku dhawaad ​​gebi unmonitored oo aan sharci u oolin oo ay la maansheeyey, dawladaha hoose lana dedejiyo, dadka doonaya si dhab ah eeyaha yihiin iyaga u gooni ah. Taasi waa sababta ay fikrad fiican in aad weydiiso dhaqda iyo kooxaha samatabbixinta ee tixraacyada, si aad u arki kartaa sida eeyaha kale u diyariyeen.
Waa dicey inay sameeyaan doorashada eey fal anshax ama siyaasadeed. Ogaada in haddii aad dooratid eey gurmadka, waxaa laga yaabaa in uu isagu ama iyadu u baahan tahay dulqaad gaar ah iyo xirfad. Eeyaha intooda badan lagu tababari karo ama tababaraa, xitaa da'aha ka weyn, laakiin haddii aadan diyaar u ah ama ay awoodaan in ay ka go'an ah oo joogto ah waqti iyo shaqada, sort ah oo kala duwan oo eey laga yaabaa in aad si fiican u habboon. Helitaanka eey purebred marka ay jiraan eeyo badan oo saboolka baahanna hoyga ayaa weli, si ay maskaxdayda, doorasho si fiican u ansax, iyo mararka qaarkood mid ka fiican.
* ● qofka waa cadowgaaga ugu xun marka ay timaado keeno eey gurigaaga galay.
Qaado waqti aad. Ha go'aan eey sababta oo ah mid aad aragtay oo aad jeclaan on show TV ama dhex socday waddada. Ama si la yaab carruurtaada, ama waalidka kulaylaha aad madhan, ama sababtoo ah waxaad maqashay sirdoonka ah waa smart. Collies Border waa smart, laakiin waxay wax unspeakably doqon, sida isku dayayaan in ay dhaqaynaa baabuur qashinka. Eyga A smart khasab ma aha in xayawaanka weyn, si kastaba. Waxaan ahaa ma ku shuqloonyihiin Nicmo mana falsafada markii Orson baxay tirada sidii loo furi lahaa qaboojiyaha iyo saaro digaag oo dhan.
* Hoos u dhig filayo.
The loo yaqaa frolicking on cagaarka ee commercials eey-cunto u qurux badan, laakiin u qalmay waa inaad qaadandoonaan eey dhabta ah. Muqisho Real leeyihiin shilalka inta lagu guda jiro tababarka Jabsashada, katiifadaha qalad ah ee cagaarka, calaliyo wax maal. Eeyaha Real rogo in scat deerada oo markaas u gal bood sariirtay. Waxay u baahan yihiin tallaalada iyo daawooyinka; ay xanuunsadaan.
Eeyaha Real marnaba ka heli kartaa wax badan oo ka mid ah fursad u helaan inay ku xidhnaan aad garab marayo park ee. Sababtoo ah si eeyo badan ayaa si xun u tababaran, ay sameeyaan eey aan ku caashaqay sii kordheysa walwalsan. Buurtinle dalka oo dhan qoro tigidhada loogu talagalay dadka ku socdaan eeyaha fuliyeen. Dadka eyda is dacweeyay xayawanka iyaga’ Qaniinyada, xataa dhaqanka cabsi galinayaa. Shirkadaha caymisku waxay sii kordhaysa hubiso si aad u aragto sirdoonka Eey aad qabto, iyo burin siyaasadaha haddii aanay ansixin aadan. Qaar ka mid ah kooxaha xayawaanka-rumaysannahay eeyaha waa in la siiyaa xaaladda sharci ka weyn, ku dhawaad ​​siman aadanaha '. Qaar ka mid ah aadanuhu ma aha kuwo Rumayn waa in loo ogol yahay in ay “gaar ah” eey at dhan. Laakiin Aragtida maangalka ah Dog Training diiradda saaraya masuuliyadda lahaanshaha.
* Iyo karo xilalka kor ku ekaan kartaa xarriiqeysa.
Dogs u baahan inuu baxo xitaa marka uu ka duudduubay, oo baraf. Waxay u baahan yihiin fiiro, Jacayl, kicinta, iyo jimicsiga, xitaa marka aad daasho, mashquul, ama ma in niyadda ka. Baahiyahooda ma Abate marka aad rabto in todobaadkan a off ama haddii aad joogi daahay xafiiska.
Eey ku caashaqay wargaliyay filan dhibaatooyinka iyo u waynayn la kaftan iyo samir. Bedelkeeda, ay hesho jacayl badan, madadaalo, iyo saaxiibnimo. Waxaa jira isku dhacyo iyo abaal xiriir kasta, aadanaha ama canine. Waxaan aaminsanahay in la qaato aragtida dheer marka ay timaado eeyaha. Waxaad u baahan tahay si aad u aragto ka baxsan xilligan, gaar ahaan marka aad tahay dabaqa at saddex A.M. dabbing ee rooga la Nature 's Miracle, isku dayaya inay ur saaro. View dheer oo kaliya yimaado la fahmo dabeecadda xayawaankaas, iyo in aan oggolaanno in xitaa dadaal weyn ay had iyo jeer ma mesh doonaa iska fadhinnaa.
* Iska cudur daar xadgudubka.
Just toban sano ka hor, eeyaha weli “korsaday,” ma “badbaadiyey,” fikradda ah xataa dareen ahaan eedeeyay. Eyga In ka badan ayaan hadda tirin karaa bandhigo ama ku tilmaami eeyaha ay la weedha: “Waxay ahayd mid u badan tahay in lagu xadgudbo.”Markii aan weydiin sida ay u ogaadaan, cadaymaha ay inta badan waa daruufaheeda, at fiican.
Ka taxadar haddii rabitaanka si loo badbaadiyo eey xadgudub ka waa sababta ugu weyn aad rabto mid ka mid. Waxaa jira habab badan oo ay u muujiyaan aadanaha iyo dadka reerood, loogu talo galay dadka ama xoolaha, laakiin xoolaha gaar ahaan waxaa u soo guurto gurigaaga. Haddii aad aqriyey ujeedooyin gaar kuu ah ama samayn fikradaha khaldan, labadiinaba aad qabaneysid doonaa gadaal muddo sanado ah.
Steven R. Lindsay, in uu seminal Handbook laba-mugga of Behavior Applied Dog iyo Tababarka, baadhayaa fikradaha ku saabsan xad-gudubka in helitaanka ee eeyaha. Cabsi ay ka qabaan xidhiidhka aadanaha iyo dabeecado kale oo Jeedsada mararka qaarkood la ogan karo si xun hore, Lindsay waxay xususeysaa. Laakiin shaqaalaha hoy degdeg Caabudayseen sharaxaad in markii ay la hadal adopters la filayo, oo aan ogayn in ay run tahay. “Waxaa sugan, xadgudub jireed iyo maskaxeed dhacaa oo laga yaabaa in sababta ugu weyn ee cabsida,” Lindsay qoray wargayska. “Si kastaba ha ahaatee, waxay u badan tahay waxay dhacdaa fog ka yar inta badan mid ka fili karto inta jeer ee wararka sida.”
Tan iyo markii aan eeyaha na sixi karaa, ama cabasho ku saabsan waalidkood, waa u fudud in ay u maleeyaan in ay tahay dhibanayaasha cadaawadda aadanaha, Fikradda ah in ay sidoo kale inta badan ku haboon baahida gaarka ah dareenka iyo taariikh. Laakiin genetics, inbreeding, iyo xaaladaha qashinka ah, qodobo kale oo ka mid ah, Waxa kale oo si weyn qaabeeyo eey. Inta badan, waxaan marnaba ogaan doonaa mid dhab ah in la caddeeyo waxa laga yaabaa dhereg yartahay badan khayaalka gurmadka. Aad jeclaan lahaa eey sida badan haddii aad ogaa in ay jirtay cabsi maxaa yeelay, iyadu waxay ahayd waayo aranimo dhexgalay sida baabi?
* Iska hubso wax naftaada iyo filan shaki dadka aad ka hesho eey ka.
Dadka dhaqda Good iyo shaqaalaha gurmadka iyo hoy niyada ka noqon doona ka walwalsan u leedahay inaad eey, xataa ilaa uu ka obnoxiousness. Waxay ku weydiin doonaa saabsan jadwalka, yard, xaydaanka, kids, eey-lahaanshaha waayo-aragnimo iyo ay tahay in ay. Dhab ahaantii, haddii ay sidaas yeeli waayaan, waxay ku qaadan oo ah calaamad digniin ah in laga yaabo inaad doonaya eey meel qaldan. Sidaas dad badan ogahay si yar oo ku saabsan eeyaha marka ay hesho mid ama kaa filanaya in sida in malaayiin eeyaha waxaa loo dhaqmay, ku soo laabtay, ama la iska dhaafi sanad kasta. Dadka iyaga oo qaybiyo aragnay badan oo, mararka qaar aad u badan. Idinkuna ma waxaad doonaysaan eey ka qof dooneysa inay siiso ama aad iibiso mid aan weydiinaya qaar ka mid ah su'aalaha adag.
* Naftaada Ogow.
Waxaana caado ah in lagu eedeeyo eeyaha markii ay dhibaato dhacdo, laakiin had iyo jeer ay tahay qalad. Ama waxaan ka dhigay ninkii carrabka la'aa waa doorasho (keeno huskie ah in sanaddii ah ee Boca Raton), ama ma waxaan runtii waqti iyo shakhsiyadda ee tababarka eey, ama aan qax khayaali. Inta badan, inaad ka hesho eey sababta oo ah aad u baahan tahay ama aad doonayso in wax jecel, ama wax kale oo ay u jecel yihiin, ama sababtoo ah waxaad jeclaan lahaa inaan bedelo waxyaabo aad u jeclahay in tageen. Ma jiraan wax qalad ah ama dhibaan ku saabsan in uu, laakiin waxaa sameeya eey adeeg u lahayn in ay cadaadin ama dafiri iyagoo ku adkaysanaya, “Eey ee carruurta waxaan ka helay” ama “Waxaan kaliya u helay in ay iska sii tuugada guryaha.”
Haddaba doonaya inay jecel cuslaanaya sifooyin kale? Ma waxaad ku samra? Ma leedahay dulqaad sare oo buuq, disorder, yeedhinaya iyo dadka buuqaya? Ma abaalmarinta roogaga nadiif ah iyo alaabta guriga? Ama hurdada daahay Axadda? Ma waxaad si fudud u cadhooday,? Helitaanka eey waa weyn a, qaali, Go'aanka nolol-altering in aad saamayn ku sanado.
* Dogs ma aha aadanaha, xasuuso. Waxay u malayn maayo ereyo aadane ama shuruudaha.
Waxay kuuma sheegi karo sheekooyinka, raac Xaddithyada,, akhri maankiinna (inkastoo ay samayn dareemi niyaddaada noo). Ma aha “caruurta la dhogorta,” ama carruurta oo dhan. Laga yaabaa in aan u jeclahay in la dilo, laakiin in micnaheedu ma ay tahay nala mid ah. Dhab ahaantii, eyga inta badan u jeclahay, waayo waxay na ma jeclaan. Si aad Beenin ay dogness waa ka ilaaliyo in labada noocyada. Si aad illowdo in ay yihiin xayawaan, qaalibka ah salka ku doonayeen instinctual ee midba midka kale iyo cunto, sex, iyo dareenka, waa inay wax ka beddelaan xaqiiqada dhabta ah ee dabeecadood ay, iyo in ay iyaga khatar.
* Dogs ma yihiin therapists, midkood.
Xiriirka eyga Your laga yaabaa in ay saamayn doonto iyo qaabeeya by taariikhda qoyska u gaar ah oo la soo dhaafay dareenka, laakiin awooda eey ee ay bogsiiyaan kuwa dhaawacyada jirka ah ama ka buuxi hulal waa xadidan. Dadka ayaa kuu sheegi doona in eeyaha ay fahmaan fikirradooda qortaan ogaado siraha waxa ay, laakiin ha daadisey Alaabtiinna oo shucuurta ku xayawaan. Haddii aad u baahan tahay in laga caawiyo dhibaatooyinka, oo waaweyn ama yar yar, waxaa heli. Haddii eey aad fahamsan ka khayr badan ninkaaga ama xaaskaaga, siin Eey laf, ka dibna tag arag lataliyahaaga guurka, ama ugu yaraan ay leeyihiin qaar ka mid ah wada hadal la xaaskaaga. Ha weydii eey si aad ugu faraxsanahay ama loo daweeyo murugada. Fikradahaaga eey u badan tahay ee Centerka, marka aad u socoto si aad u hesho off aad tureen oo waxaad ku quudisaan.
* Dogs Waxaa sii kordhaya la arkay sida jinni oo Ayaanle iyo naftiinna raaricin.
Aragtida QUMMAN ma aysan soo iibsan. Xidhiidhka ka sahlan aad la eey, si fiican u, sababtoo ah eeyaha waa fudud. Waxay jecel yihiin xeerarka, fafaahin joogtada ah, hogaaminta, urta jiidanaya, eeyaha kale, iyo, Dabcan, cuntada iyo dadka u bixiyaan. Mid ka mid ah waxa asaaska u ah Aragtida maan ah: Your eey waa waalan adiga kugu saabsan, laakiin sidoo kale uu ku baran karo in ku dhawaad ​​qof kale jecel haysta hamburger ah.
* Ra'yiga ah daafac adag ee aan u waajahay wata eeyo ku nool waa in aan u baahanahay in ay ahaato mid macquul ah, dabacsan, iyo hal abuur leh, adag oo ku saabsan dadka, laakiin fudud on eeyaha.
Filo badan oo aad naftaada ka mid ah marka la eego samir, go'aaminta, oo joogta ah. Sida aad tahay, Eey raaci doonaa suud. Isku day in aadan qabaa marka la eego “wanaagsan” iyo “xun” eeyaha. Kuwani waa fikradaha aadanaha in aadan codsan in xoolaha. Waxaa jira, halkii, eeyaha in ay fahmaan sida ay ku noolaadaan dunida oo dhan iyo eeyaha in aan sameeyo. Mararka qaarkood, eeyaha waa ka muuqo rabshado, hiddo ahaan burburay, ama si xun ula dhaqmeen ka baxsan dayactirka. Si farxad leh, ay tahay dhif.